Ọbara Ịtali- Otu esi etinye ya maka ịbụ nwa amaala site na agbụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Ọbara Ịtali- Otu esi etinye ya maka ịbụ nwa amaala site na agbụrụ
Echiche nke ịbụ nwa amaala site na agbụrụ achịkọtala ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ndị America na-achọgharị mgbọrọgwụ ha n'akụkụ ụwa ndị ọzọ chọrọ ị nwetaghachi ha wee bido ndụ n'ala ha si malite. Istali so na ebe ndị ama ama na-enye nhọrọ nke Jure Sanguinis ma ọ bụ ịbụ nwa amaala site na agbụrụ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ma kwado usoro ọbara gị na obodo ahụ, ị ​​nwere ikike ị nweta ịbụ nwa amaala. Nke kacha mma bụ na ọ bụ naanị mmalite ka ị nwere ike ibufe ikike n'ọgbọ ndị ọzọ.
Nhọrọ ahụ dị ka nnukwu ihe ịmalite njem mbata na ọpụpụ gị, mana ịkwesịrị ịghọta ihe ole na ole tupu ịga n'ihu. Ị nwere ike gụọ ntuziaka a zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite usoro ngwa ma werekwa ikike gị. Ahịrị nna gị nwere ike ịrụ ọrụ maka ọdịmma gị, yabụ jide n'aka na ị na-eji ya mee ihe maka ọdịmma gị. Ka anyị kọwaa otu ị ga-esi tinye ya maka ịnweta nwa amaala Ịtali site na agbụrụ.
Mara ụkpụrụ ntozu
Amaala Ịtali site na agbụrụ dị maka ndị na-achọ akwụkwọ site na usoro nna nna ha, na-enweghị oke na ọnụ ọgụgụ nke ọgbọ.. Ọ pụtara na ị nwere ike kwuo site n'aka nne na nna gị, nne na nna ochie, nne na nna ochie, na ndị ọzọ. Nke a bụ ụkpụrụ ntozu ị ga-agbaso iji guzobe nkwupụta:
Ọ bụrụ na amụrụ gị n'aka nne ma ọ bụ nna (s) Italiantali ma ọ bụ nakweere gị dị ka nwata (afọ n'okpuru afọ 21 ka a na-ewere dị ka nwatakịrị ma ọ bụrụ na anabatara tupu 1975 na n'okpuru 18 ma ọ bụrụ na anabatara mgbe 1975 gasịrị)
Nne na nna/nna nna Ịtali agaghị ewerela ịbụ nwa amaala site n'ịchịkọta onwe ya na obodo ọzọ mgbe a mụrụ nwa ha
Nna nna kwesịrị ịbụ nwa amaala Ịtali mgbe mba ahụ jikọtara ọnụ na 1861
Ghọta ihe ndị ọzọ
Ntozu maka ụzọ ahụ na-ada ka ọ dị mfe ka a mụrụ n'aka nne na nna Ịtali. Ma e nwere ụfọdụ ewepu na iwu. Ọ bụrụ na ị daba n'otu n'ime ngalaba ndị a, ị ga-achọ ụzọ ọzọ itinye akwụkwọ. Nke a bụ ihe ewepụrụ na iwu izugbe:
Nna nna a mụrụ Ịtali ewepụtala onwe ya tupu June 14, 1912
A mụrụ gị n'aka nwanyị Ịtali tupu 1948
Ịchọrọ ịzọrọ site n'ahịrị nne, ya na nwanyị rịgoro elu nke mụrụ tupu Jenụwarị 1, 1948
E kweghị ka ụmụ nwanyị Italy nyefee ikike ịbụ nwa amaala tupu 1948, na-eme ka iwu ahụ bụrụ ịkpa ókè. Ndozi na-esote na-enye ndị na-achọ akwụkwọ ohere itinye akwụkwọ site na usoro ikpe n'okpuru Iwu 1948.
Gaa n'ihu site na iji akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị tozuru maka ụzọ ahụ, ị ​​​​nwere ike ịga n'ihu na usoro ahụ. Mana ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịmalite site na nchịkọta akwụkwọ n'ihi na ị ga-achọ ndepụta ogologo maka usoro ahụ. N'ụzọ bụ isi, ị ga-achọ asambodo ọmụmụ, ọnwụ, alụm di na nwunye, na nnwekọrịta okike iji kwado njikọ nna ochie gị. Ị ga-achọ ha site na mgbakọ Italian nke nna nna gị yana obodo nke okike. Ọ nwere ike isiri gị ike ichekwa ha n'ụlọ ọrụ mpaghara, mana ị ga-azụta ha maka usoro a. Ekwesịrị ị nweta akwụkwọ ndekọ dị mkpa nke US nyere, tụgharịa, ma tinye akwụkwọ ozi ka e were ya dịka iwu kwadoro maka usoro a.
Nwee atụmanya doro anya
Ozugbo ị nwetara akwụkwọ gị, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka ịbụ nwa amaala Ịtali site na agbụrụ. Ị ga-ejupụta akwụkwọ anamachọihe ma nyefee ya na consulate Italian kacha nso ka ịmalite. Ha ga-enye gị oge maka ịnyefe akwụkwọ na ịpụta maka ajụjụ ọnụ. N'agbanyeghị na ọ bụ nzọụkwụ mbụ gị kwupụta a paspọtụ nke abụọ, ịkwesịrị inwe atụmanya doro anya gbasara usoro na usoro oge. Nhọpụta ahụ nwere ike were ogologo oge otu afọ, dabere na ọnụọgụ ngwa ndị emegoro. Ị nwere ike ịtụle itinye akwụkwọ n'ime Italy iji mee njem ahụ ngwa ngwa. Ị nwekwara ike ịtọ ebe obibi iwu kwadoro n'oge nhazi.
Soro ọkachamara rụkọọ ọrụ
Ọ kacha mma ka gị na onye ọkachamara gbasara nwa amaala Ịtali nyere gị aka na usoro a. Ha nwere ike iduzi ma nyere gị aka n'oge ọ bụla, na-eme ka njem dị nro ma dị mfe n'ahịrị. Ọkachamara mpaghara nwere ụdị njikọ ziri ezi, yabụ ị nweta akwụkwọ gị na Italy ga-adị mfe. Ha ga-agbakwa mbọ hụ na akwụkwọ ndị ọzọ niile dị na enweghị mperi na mperi na ngwa ahụ. Inwe ọkachamara na-ahụ maka usoro a na-enyekwa gị obi ike na udo nke uche.
Amaala site na agbụrụ bụ ụzọ kachasị mfe iji banye Italy wee malite ndụ ọhụrụ na obodo nna nna gị. Ma usoro ahụ nwere ike ịdị ogologo ma dị egwu, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agagharị ya na-enweghị ọkachamara ọkachamara. Jikọọ aka na ọkachamara, na ị ga-emezu ihe mgbaru ọsọ gị ọbụna tupu ị na-atụ anya.